I-FRCRP / SAA (I-C-Reactive Protein / Serum Amyloid A) Indawo yokubuyisela indawo yokuKhangela ukuvavanya-iSinocare
I-FRCRP / SAA (I-C-Reactive Protein / Serum Amyloid A) Ikhithi yeReagent
[imeyile ikhuselwe] I-FRCRP / SAA (C-Reactive Protein / Serum Amyloid A) Reagent Kit yenzelwe ukumisela ubungakanani be-protein esebenzayo ye-C kunye ne-Serum Amyloid A kwi-serum yabantu. Ngokwikliniki, ezi zikhombisi zimbini zisetyenziswa ikakhulu njengophawu lokudumba.
I-CRP yiprotein (yesigaba esibi) kwiprotheni egazini ekhula ngokukhawuleza xa umzimba wosulelekile okanye xa ukonakala izicwili. Yenza kusebenze kwaye kuqinise ukungenisa kwe-phagocyte, kucoca i-microorganism engenayo kunye ne-histiocyte eyonakalisiweyo, necrotic okanye apoptotic. Xa isetyenziswe njengesalathiso esibuthathaka kakhulu sokuphendula kwinqanaba lesigaba esibuhlungu, inqanaba leCRP kumava egazi ukunyuka okukhawulezileyo kunye nokubonakalayo kwaye inokufikelela kumaxesha angama-2000 aqhelekileyo kwimeko ye-infyoction ye-myocardial ebukhali, inxeba, usulelo, ukudumba, uqhaqho kunye nokungena . Umlinganiso weCRP unceda ukulandela ikhosi yezifo xa zidityaniswe nembali yeklinikhi.
Ifana neCRP, i-SAA isetyenziselwa ukuvavanya inkqubo yokuphendula kwinqanaba lesigaba. I-SAA sisalathiso esinovakalelo apho uxinzelelo luqala ukunyuka malunga ne-8h emva kwempendulo yokuvuvukala. Kuthatha ixesha elincinci kwinqanaba leSAA ukuphakamisa kunye nokudlula kuluhlu lwesalathiso kuneCRP. Kubantu abaqhelekileyo, umda ophezulu wesithuba sereferensi ngamaxesha angama-10 kwixabiso le-CRP, ngelixa li-5 kuphela ixesha e-SAA. Ukuphakama kwe-SAA kuqheleke ngakumbi kunokuphakama kweCRP kusulelo oluncinci, njengosulelo lwentsholongwane. Kwizifo ezosulelayo, ukunyuka kwexabiso leSAA kukhulu kunokunyuka kwexabiso leCRP, okuthetha ukuba ukufunyanwa kweSAA kunceda ngakumbi ekuchongeni ngokuthelekisa "okuqhelekileyo" kunye neempendulo zesigaba esibi. Ngokwesiqhelo, malunga ne-2/3 yabantu abanesifo esibandayo banamava okunyuka kwi-SAA, ngelixa kungekho ngaphezulu kwe-1/2 yabo bafumana ukunyuka kweCRP.
Uluhlu olubanzi lokulinganisa
Iziphumo ziyafumaneka kwimizuzu eli-9
Ixabiso elifanelekileyo ngaphandle kokusetyenziswa okongezelelekileyo kwaye akukho sondlo semihla ngemihla siyimfuneko
I-FRCRP: 0.5 ~ 320 mg / L
I-SAA: 5 ~ 200 mg / L